Xaalada Magaalada Nairobi oo saaka ka duwan Sidii hore |
Xaalada Magaalada Nairobi oo saaka ka duwan Sidii hore
Waxaa saaka hakad ku jira dhaq-dhaqaaqa Magaalada Nairobi ee dalka Kenya, dhanka ganacsiga iyo isu socodka dadka iyo gaadiidka oo Magaalada Nairobi saaka waxa ay u eeg tahay meel lama dagaan ah, sida Warbaahinta Kenya ay tabinayso.
Ammaanka guud ee Magaalada ayaa si weyn loo adkeeyay waxaana amniga iska kaashanaya ciidamada Booliska dalka Kenya iyo ciidan gaar ah oo ilaalinaya Madaxweynaha dalka Mareykanka Obama oo ku sugan Magaalada Nairobi.
Sawiro laga soo qaaday meelo ka mid ah caasimada Magaalada Nairobi ayaa muujinaya sida ay Magaalada cidlo u tahay oo ay u xiran yihiin goobaha ganacsiga Magaalada iyo isu socodka dadka iyo gaadiidka oo yar.
Ciidamo Boolis aad u tiro badan ayaa sugaya ammaanka Magaalada Nairobi oo ka duwan sidii hore, waxaana wadooyinka lagu arkayaa Askar badan oo qoryo la garwaaxsan, ciidanka ayaa ka feejigan suurtagalnimada weeraro ka dhaca Magaalada oo lagu carqaladeeyo safarka Madaxweynaha Mareykanka.
Diyaaradaha dagaalka Mareykanka ayaa dul heehaabaya hawada Magaalada Nairobi, oo waxa ay dusha kala socdaan dhaq-dhaqaaqa Magaaladaasi.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Obama, ayaa saaka lagu wadaa inuu furo shirka looga hadlaayo arimaha ganacsiga ee Dowladda Kenya ay martigelinayso.
Mr. Obama wuxuu intaa kadib booqan doonaa taallo loo dhisay dadkii ku dhintay qaraxii lagu weeraray safaaraddii uu Maraykanku ku lahaa Nairobi.
Kenya Al Shabaab ayaa dhowr mar waxa ay ka geysteen weeraro lidi ku ah dhanka ammaanka, waxaana ka mid ahaa weeraradaasi, weerarkii Westgate ee dhiiga badan ku daatay iyo weerarkii cuslaa ee Jaamacada Magaalada Gaarisa.